26 May 2017 . 6:33 PM
မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ဆေးရုံတွေမှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီး ၂ ဦးမှာ တစ်ဦးဟာ ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျမှုကြောင့် သေဆုံးနေကြပါတယ်။ သေဆုံးသူ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အများစုဟာ လူငယ်အမျိုးသမီးများဖြစ်ကြပြီး အများစုက အိမ်ထောင်သည်တွေမဟုတ်ကြဘူးလို့ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (WHO) က ပြုလုပ်တဲ့ စစ်တမ်းများအရ သိရပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျမှုတွေဖြစ်ပွားရခြင်းရဲ့ အဓိကအကြောင်းအရင်းကတော့ တရားမဝင် ကိုယ်ဝန် ဖျက်ချခြင်းတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ စစ်တမ်းများက ဆိုပါတယ်။
လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာ တရားမဝင်ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချမှုတွေ အများအပြားရှိနေခဲ့ပြီး နှစ်စဉ်ကိုယ်ဝန်ဆောင် သေဆုံးမှုနှုန်းမြင့်တက်လျက်ရှိကာ အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေကြား ကိုယ်ဝန်ဆောင်သေဆုံးမှုနှုန်း ဒုတိယ အမြင့်ဆုံးနေရာက ရပ်တည်နေကြောင်း WHO ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရပါတယ်။ ဘာကြောင့် တရားမဝင် ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချမှုတွေ တစ်စတစ်စများပြားလာရသလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရင်းကို လေ့လာကြည့်ကြရအောင်။
မြန်မာအမျိုးသမီးတွေကို တရားမဝင်ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းဆီ မရောက်ရောက်အောင် တွန်းပို့နေတဲ့ အရာတွေကတော့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအသိပညာအားနည်းခြင်းနဲ့ ပြဿနာကိုစနစ်တကျဖြေရှင်းဖို့ အရှက်အကြောက်တရားကြီးခြင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ နည်းပညာတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှ လူငယ်တွေရဲ့ အသိပညာနဲ့သင်ယူနိုင်မှုတွေဟာလည်း မြင့်တက်လာကြပါတယ်။ ခေတ်စနစ်ရဲ့ ပွင့်လင်းလာမှုတွေနဲ့အတူ လူငယ်တွေအကြား လက်မထပ်ခင်အတူတကွနေထိုင်ခြင်းကိစ္စတွေဟာလည်း များပြားလာခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ မျိုးပွားခြင်းဆိုင်ရာ အသိပညာတွေကိုတော့ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် မသိကြသေးပါဘူး။ ရောဂါ မကူးစက်အောင်ကိုယ်ဝန်မရအောင်ဘယ်လိုနေထိုင်မလဲ၊ အကယ်၍ အကာအကွယ်မသုံးဘဲ အတူနေထိုင်ခဲ့မိရင် ကိုယ်ဝန်မရအောင်ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ၊ စနစ်တကျ ဘယ်လိုသန္ဓေတားဆီးကြမလဲ ဆိုတဲ့အချက်တွေကို စနစ်တကျသိရှိနားလည်တဲ့အမျိုးသမီးတွေက အရမ်းကိုနည်းပါးနေပါသေးတယ်။
“အသက်ရှင်ခဲ့ပေမဲ့ နောက်ထပ်ကလေးတော့ မွေးခွင့်မရှိတော့ဘူး။ ကျွန်မမျိုးဆက်ကို ကျွန်မ မမွေးနိုင် တော့ဘူးပေါ့”လို့ တရားမဝင်ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းကြောင့် သားအိမ်ထုတ်ခဲ့ရတဲ့ မယမင်း (အမည်လွှဲ) က ပြောပါတယ်။ သူမချစ်သူနဲ့ လက်မထပ်မီ အတူနေခဲ့ပြီး ကိုယ်ဝန်ရခဲ့ရာမှ ချစ်သူကလည်း တာဝန်မယူနိုင်တာကြောင့် ကြံရာမရဘဲ တရားမဝင် ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခဲ့ရတယ်လို့ရှင်းပြပါတယ်။
တရားမဝင်ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချရာမှ သားအိမ်ပေါက်သွားခဲ့ပြီး သားအိမ်ကိုပါ ထုတ်ပစ်လိုက်ရကြောင်း ညှိုးငယ်တဲ့မျက်နှာထားနဲ့ ရှင်းပြပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ နောက်ထပ် မယမင်းလိုအမျိုးသမီးတွေ အများကြီး ရှိနေပါသေးတယ်။ ဒီလိုအဖြစ်အပျက်တွေက မြန်မာနိုင်ငံမှာ လိင်မှုဆိုင်ရာ အသိပညာပေးမှုတွေ အများအပြားလိုအပ်နေသေးကြောင်း မီးမောင်းထိုးပြနေပါတယ်။
“တော်တော်များများက ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချချင်တာပဲသိတယ်။ ကိုယ်ဝန်ကို ဖျက်ချရင် ပျက်ကျသွားမယ် အထိပဲ သိကြတယ်။ အဲ့ဒီရဲ့ နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေတော့ မသိနားမလည်ကြဘူး”လို့ သဃန်းကျွန်း အထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံကြီးမှာ အထက်တန်းသူနာပြုဆရာမအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ ဆရာမ ဒေါ်သီရိမွန်မွန်က Akhayar ကို ပြောပါတယ်။
ဆေးရုံကို ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျပြီးရောက်လာတဲ့အမျိုးသမီးဆယ်ယောက်မှာ ရှစ်ယောက်ခန့်ဟာ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပြီး အများစုမှာ သေဆုံးလေ့ရှိကြကြောင်း သူမက ဆိုပါတယ်။
သေဆုံးသူကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များမှာ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်များနှင့် အသက်(၄၀) ကျော် မိခင်များပါဝင်ပြီးအများစုမှာ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချစဉ် အန္တရာယ်ရှိစေနိုင်တဲ့ သံချွန်၊ အက်စစ်ဓာတ်ပစ္စည်းများနှင့် ပြုလုပ်ခြင်းကြောင့်သော်လည်းကောင်း၊ ပြင်းထန်စွာနှိပ်ချခြင်းကြောင့်သော်လည်းကောင်း လူနာမှာ ရောဂါပိုးများဝင်ရောက်ကာ သွေးအလွန်အကျွံသွန်ခြင်း၊ ဝမ်းဗိုက်တစ်ခုလုံး၌ မစင်၊ ပြည်ပုပ်များ ပြည့်နှက်နေခြင်း၊ အူပေါက်ခြင်း၊ သားအိမ်ပေါက်ခြင်းများဖြစ်ပေါ်၍ ရောက်ရှိလာကြခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းကို ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ရာဇသတ်ကြီးဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၀၂ အရ ပြင်းပြင်း ထန်ထန် တားမြစ်ထားပါတယ်။ “မည်သူမဆို ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိန်းမရဲ့ ကိုယ်ဝန်ကိုပျက်ကျစေခြင်းပြုလျှင် ထောင်ဒဏ်သုံးနှစ်နဲ့ငွေဒဏ်ကျခံဖို့ သတ်မှတ်ထားပြီး ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးက အလိုတူအလိုပါ ဖျက်ချ လိုပါက ထောင်ဒဏ်ခုနစ်နှစ်အထိ ချမှတ်နိုင်တယ်”လို့ သတ်မှတ်ပြဌာန်းထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းနဲ့ပတ်သတ်ပြီး အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ရာဇဝတ်မှုမမြောက်စေတဲ့ ဥပဒေကြမ်း ကို ရေးဆွဲပြင်ဆင်ခဲ့သော်လည်း ဘာသာရေးနဲ့လူမှုရေးဆိုင်ရာစံနှုန်းတွေကြောင့် အောင်မြင်မှုမရသေးကြောင်း အခရာ အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့တည်ထောင်သူ ဒေါ်ထားထားက ပြောပါတယ်။
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဥပဒေအရ တရားဝင်ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခွင့်ပြုထားတဲ့ နိုင်ငံတွေအများအပြားရှိပါတယ်။ အီရန်နိုင်ငံမှာဆိုရင် ၁၉၇၈ခုနှစ်ကတည်းက ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခွင့်ဥပဒေကို ပြဌာန်းထားပါတယ်။ တောင်အာဖရိကနိုင်ငံတော်တော်များများမှာလည်း တရားဝင်ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခွင့်ပြုထားပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ တော့ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းကို တားမြစ်ထားပေမဲ့ မုဒိန်းမှုနဲ့စပ်ဆက်ပြီး နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးအနေနဲ့ ရရှိလာတဲ့ကိုယ်ဝန်ဖြစ်ကြောင်း ဆရာဝန်ရဲ့ထောက်ခံချက်ပါခဲ့ရင်တော့ တရားဝင်ဖျက်ချခွင့် ရှိပါတယ်။
ဗြိတိန်နိုင်ငံမှာဆိုရင်လည်း ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလ ၂၈ ပတ်အောက်ကိုယ်ဝန်တွေကို တရားဝင် ဖျက်ချခွင့်ပြုထားပါတယ်။ တရားဝင်ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခွင့်ပြုထားတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ အခြားတားမြစ်ထားတဲ့ နိုင်ငံတွေထက် ကိုယ်ဝန်ဆောင် သေဆုံးမှုရာခိုင်နှုန်း သိသိသာသာကို နည်းပါးနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒီလိုဥပဒေတွေ ပြဌာန်းထားတဲ့အတွက် သုံးတဲ့ဆေးတွေ၊ နည်းလမ်းတွေကအစ အန္တရာယ်ကင်းပြီး မလိုအပ်ဘဲ သေဆုံးမှုတွေ ရှိမလာတော့ဘူးလို့ ကျွမ်းကျင်သူတွေက ဆိုပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်စံထားမှုတွေ၊ ဘာသာရေး တန်ဖိုးထားမှုတွေအရ ဒီလိုဥပဒေကို ပြဌာန်းဖို့ ခက်ခဲနေပါသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခြားလုပ်ဆောင်မှုတွေ ဥပမာ သားဆက်ခြား ပညာပေး လုပ်ငန်းတွေ ၊ လိင်မှုဆိုင်ရာ အသိပညာပေးခြင်းတွေ ၊ တရားမဝင်ဆေးဝါးတွေနဲ့ တရားမဝင်သားဆက်ခြား နည်းတွေကြောင့် နောက်ဆက်တွဲ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ အန္တရာယ်တွေကို ကျယ်ကျယ်ပြန်ပြန့် လူအများသိလာ အောင် လုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်နေပါတယ်။
လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံမှာ သားဆက်ခြားကိစ္စတွေအတွက် မာရီစတုတ်တို့ Myanmar Medical Association တို့လို အဖွဲ့အစည်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဖုန်းဆက်ပြီး သိလိုတဲ့အချက်တွေ မေးမြန်းတာ၊ သားဆက်ခြားဆေး ၊ ပစ္စည်းများအခမဲ့ရယူတာတွေ လုပ်လို့ရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အခမဲ့အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုတွေ လုပ်ဆောင်ပေးနေတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်။
ဒါကြောင့် အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ အသိပညာပေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အမြဲထိတွေ့ပြီး ကျန်းမာရေးဗဟုသုတတွေ ရှိလာအောင် လုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။ တစ်ခုခု ဖြစ်ပွားခဲ့ရင်လည်း ကျွမ်းကျင်သူ ပညာရှင်များရဲ့ အကြံဥာဏ်တွေကို ရယူဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်။ ဒါမှ ပျော်ရွှင်ကျန်းမာတဲ့ လူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်း ကို ဖန်တီးလာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
မိမိရဲ့ကျန်းမာရေးဗဟုသုတအသိဥာဏ်နဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ အသက်တွေကို အလဟဿမဆုံးရှုံးအောင် ကာကွယ်ကြပါစို့။
Ref: မြန်မာနိုင်ငံ ရာဇာသတ်ကြီးဥပဒေ
“World Abortion Policies 2013” (PDF). United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division.
Gordon, Sarah Barringer. “Law and Everyday Death: Infanticide and the Backlash
against Woman’s Rights after the Civil War.”
Abortion Rights is the only national grass roots membership-based campaign
မွနျမာနိုငျငံမှာရှိတဲ့ ဆေးရုံတှမှော ကိုယျဝနျဆောငျအမြိုးသမီး ၂ ဦးမှာ တဈဦးဟာ ကိုယျဝနျပကျြကမြှုကွောငျ့ သဆေုံးနကွေပါတယျ။ သဆေုံးသူ ကိုယျဝနျဆောငျအမြားစုဟာ လူငယျအမြိုးသမီးမြားဖွဈကွပွီး အမြားစုက အိမျထောငျသညျတှမေဟုတျကွဘူးလို့ ကမ်ဘာ့ကနျြးမာရေးအဖှဲ့ (WHO) က ပွုလုပျတဲ့ စဈတမျးမြားအရ သိရပါတယျ။ ကိုယျဝနျပကျြကမြှုတှဖွေဈပှားရခွငျးရဲ့ အဓိကအကွောငျးအရငျးကတော့ တရားမဝငျ ကိုယျဝနျ ဖကျြခခြွငျးတှကွေောငျ့ဖွဈတယျလို့ စဈတမျးမြားက ဆိုပါတယျ။
လကျရှိမွနျမာနိုငျငံမှာ တရားမဝငျကိုယျဝနျဖကျြခမြှုတှေ အမြားအပွားရှိနခေဲ့ပွီး နှဈစဉျကိုယျဝနျဆောငျ သဆေုံးမှုနှုနျးမွငျ့တကျလကျြရှိကာ အရှတေ့ောငျအာရှနိုငျငံတှကွေား ကိုယျဝနျဆောငျသဆေုံးမှုနှုနျး ဒုတိယ အမွငျ့ဆုံးနရောက ရပျတညျနကွေောငျး WHO ရဲ့ထုတျပွနျခကျြအရ သိရပါတယျ။ ဘာကွောငျ့ တရားမဝငျ ကိုယျဝနျဖကျြခမြှုတှေ တဈစတဈစမြားပွားလာရသလဲဆိုတဲ့အကွောငျးအရငျးကို လလေ့ာကွညျ့ကွရအောငျ။
မွနျမာအမြိုးသမီးတှကေို တရားမဝငျကိုယျဝနျဖကျြခခြွငျးဆီ မရောကျရောကျအောငျ တှနျးပို့နတေဲ့ အရာတှကေတော့ လိငျပိုငျးဆိုငျရာအသိပညာအားနညျးခွငျးနဲ့ ပွဿနာကိုစနဈတကဖြွရှေငျးဖို့ အရှကျအကွောကျတရားကွီးခွငျးတှပေဲဖွဈပါတယျ။ နညျးပညာတိုးတကျလာတာနဲ့အမြှ လူငယျတှရေဲ့ အသိပညာနဲ့သငျယူနိုငျမှုတှဟောလညျး မွငျ့တကျလာကွပါတယျ။ ခတျေစနဈရဲ့ ပှငျ့လငျးလာမှုတှနေဲ့အတူ လူငယျတှအေကွား လကျမထပျခငျအတူတကှနထေိုငျခွငျးကိစ်စတှဟောလညျး မြားပွားလာခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ လိငျပိုငျးဆိုငျရာနဲ့ မြိုးပှားခွငျးဆိုငျရာ အသိပညာတှကေိုတော့ ကယျြကယျြပွနျ့ပွနျ့ မသိကွသေးပါဘူး။ ရောဂါ မကူးစကျအောငျကိုယျဝနျမရအောငျဘယျလိုနထေိုငျမလဲ၊ အကယျ၍ အကာအကှယျမသုံးဘဲ အတူနထေိုငျခဲ့မိရငျ ကိုယျဝနျမရအောငျဘယျလိုဖွရှေငျးမလဲ၊ စနဈတကြ ဘယျလိုသန်ဓတေားဆီးကွမလဲ ဆိုတဲ့အခကျြတှကေို စနဈတကသြိရှိနားလညျတဲ့အမြိုးသမီးတှကေ အရမျးကိုနညျးပါးနပေါသေးတယျ။
“အသကျရှငျခဲ့ပမေဲ့ နောကျထပျကလေးတော့ မှေးခှငျ့မရှိတော့ဘူး။ ကြှနျမမြိုးဆကျကို ကြှနျမ မမှေးနိုငျ တော့ဘူးပေါ့”လို့ တရားမဝငျကိုယျဝနျဖကျြခခြွငျးကွောငျ့ သားအိမျထုတျခဲ့ရတဲ့ မယမငျး (အမညျလှဲ) က ပွောပါတယျ။ သူမခဈြသူနဲ့ လကျမထပျမီ အတူနခေဲ့ပွီး ကိုယျဝနျရခဲ့ရာမှ ခဈြသူကလညျး တာဝနျမယူနိုငျတာကွောငျ့ ကွံရာမရဘဲ တရားမဝငျ ကိုယျဝနျဖကျြခခြဲ့ရတယျလို့ရှငျးပွပါတယျ။
တရားမဝငျကိုယျဝနျဖကျြခရြာမှ သားအိမျပေါကျသှားခဲ့ပွီး သားအိမျကိုပါ ထုတျပဈလိုကျရကွောငျး ညှိုးငယျတဲ့မကျြနှာထားနဲ့ ရှငျးပွပါတယျ။ မွနျမာနိုငျငံမှာ နောကျထပျ မယမငျးလိုအမြိုးသမီးတှေ အမြားကွီး ရှိနပေါသေးတယျ။ ဒီလိုအဖွဈအပကျြတှကေ မွနျမာနိုငျငံမှာ လိငျမှုဆိုငျရာ အသိပညာပေးမှုတှေ အမြားအပွားလိုအပျနသေေးကွောငျး မီးမောငျးထိုးပွနပေါတယျ။
“တျောတျောမြားမြားက ကိုယျဝနျဖကျြခခြငျြတာပဲသိတယျ။ ကိုယျဝနျကို ဖကျြခရြငျ ပကျြကသြှားမယျ အထိပဲ သိကွတယျ။ အဲ့ဒီရဲ့ နောကျဆကျတှဲဆိုးကြိုးတှတေော့ မသိနားမလညျကွဘူး”လို့ သဃနျးကြှနျး အထှထှေရေောဂါကုဆေးရုံကွီးမှာ အထကျတနျးသူနာပွုဆရာမအဖွဈ တာဝနျထမျးဆောငျနတေဲ့ ဆရာမ ဒျေါသီရိမှနျမှနျက Akhayar ကို ပွောပါတယျ။
ဆေးရုံကို ကိုယျဝနျပကျြကပြွီးရောကျလာတဲ့အမြိုးသမီးဆယျယောကျမှာ ရှဈယောကျခနျ့ဟာ ကိုယျဝနျဖကျြခခြွငျးကွောငျ့ဖွဈပွီး အမြားစုမှာ သဆေုံးလရှေိ့ကွကွောငျး သူမက ဆိုပါတယျ။
သဆေုံးသူကိုယျဝနျဆောငျမိခငျမြားမှာ ဆယျကြျောသကျအရှယျမြားနှငျ့ အသကျ(၄၀) ကြျော မိခငျမြားပါဝငျပွီးအမြားစုမှာ ကိုယျဝနျဖကျြခစြဉျ အန်တရာယျရှိစနေိုငျတဲ့ သံခြှနျ၊ အကျစဈဓာတျပစ်စညျးမြားနှငျ့ ပွုလုပျခွငျးကွောငျ့သျောလညျးကောငျး၊ ပွငျးထနျစှာနှိပျခခြွငျးကွောငျ့သျောလညျးကောငျး လူနာမှာ ရောဂါပိုးမြားဝငျရောကျကာ သှေးအလှနျအကြှံသှနျခွငျး၊ ဝမျးဗိုကျတဈခုလုံး၌ မစငျ၊ ပွညျပုပျမြား ပွညျ့နှကျနခွေငျး၊ အူပေါကျခွငျး၊ သားအိမျပေါကျခွငျးမြားဖွဈပျေါ၍ ရောကျရှိလာကွခွငျးဖွဈကွောငျး သိရပါတယျ။
မွနျမာနိုငျငံမှာ ကိုယျဝနျဖကျြခခြွငျးကို ပွဈမှုဆိုငျရာ ရာဇသတျကွီးဥပဒေ ပုဒျမ ၃၀၂ အရ ပွငျးပွငျး ထနျထနျ တားမွဈထားပါတယျ။ “မညျသူမဆို ကိုယျဝနျဆောငျမိနျးမရဲ့ ကိုယျဝနျကိုပကျြကစြခွေငျးပွုလြှငျ ထောငျဒဏျသုံးနှဈနဲ့ငှဒေဏျကခြံဖို့ သတျမှတျထားပွီး ကိုယျဝနျဆောငျအမြိုးသမီးက အလိုတူအလိုပါ ဖကျြခြ လိုပါက ထောငျဒဏျခုနဈနှဈအထိ ခမြှတျနိုငျတယျ”လို့ သတျမှတျပွဌာနျးထားတယျလို့ သိရပါတယျ။
ကိုယျဝနျဖကျြခခြွငျးနဲ့ပတျသတျပွီး အတိုငျးအတာတဈခုအထိ ရာဇဝတျမှုမမွောကျစတေဲ့ ဥပဒကွေမျး ကို ရေးဆှဲပွငျဆငျခဲ့သျောလညျး ဘာသာရေးနဲ့လူမှုရေးဆိုငျရာစံနှုနျးတှကွေောငျ့ အောငျမွငျမှုမရသေးကွောငျး အခရာ အမြိုးသမီးအခှငျ့အရေးလှုပျရှားမှုအဖှဲ့တညျထောငျသူ ဒျေါထားထားက ပွောပါတယျ။
ကမ်ဘာပျေါမှာ ဥပဒအေရ တရားဝငျကိုယျဝနျဖကျြခခြှငျ့ပွုထားတဲ့ နိုငျငံတှအေမြားအပွားရှိပါတယျ။ အီရနျနိုငျငံမှာဆိုရငျ ၁၉၇၈ခုနှဈကတညျးက ကိုယျဝနျဖကျြခခြှငျ့ဥပဒကေို ပွဌာနျးထားပါတယျ။ တောငျအာဖရိကနိုငျငံတျောတျောမြားမြားမှာလညျး တရားဝငျကိုယျဝနျဖကျြခခြှငျ့ပွုထားပါတယျ။ ဂပြနျနိုငျငံမှာ တော့ ကိုယျဝနျဖကျြခခြွငျးကို တားမွဈထားပမေဲ့ မုဒိနျးမှုနဲ့စပျဆကျပွီး နောကျဆကျတှဲဆိုးကြိုးအနနေဲ့ ရရှိလာတဲ့ကိုယျဝနျဖွဈကွောငျး ဆရာဝနျရဲ့ထောကျခံခကျြပါခဲ့ရငျတော့ တရားဝငျဖကျြခခြှငျ့ ရှိပါတယျ။
ဗွိတိနျနိုငျငံမှာဆိုရငျလညျး ကိုယျဝနျဆောငျကာလ ၂၈ ပတျအောကျကိုယျဝနျတှကေို တရားဝငျ ဖကျြခခြှငျ့ပွုထားပါတယျ။ တရားဝငျကိုယျဝနျဖကျြခခြှငျ့ပွုထားတဲ့ နိုငျငံတှမှော အခွားတားမွဈထားတဲ့ နိုငျငံတှထေကျ ကိုယျဝနျဆောငျ သဆေုံးမှုရာခိုငျနှုနျး သိသိသာသာကို နညျးပါးနတောကို တှရေ့ပါတယျ။ ဒီလိုဥပဒတှေေ ပွဌာနျးထားတဲ့အတှကျ သုံးတဲ့ဆေးတှေ၊ နညျးလမျးတှကေအစ အန်တရာယျကငျးပွီး မလိုအပျဘဲ သဆေုံးမှုတှေ ရှိမလာတော့ဘူးလို့ ကြှမျးကငျြသူတှကေ ဆိုပါတယျ။
မွနျမာနိုငျငံမှာတော့ လူမှုပတျဝနျးကငျြစံထားမှုတှေ၊ ဘာသာရေး တနျဖိုးထားမှုတှအေရ ဒီလိုဥပဒကေို ပွဌာနျးဖို့ ခကျခဲနပေါသေးတယျ။ ဒါပမေဲ့ အခွားလုပျဆောငျမှုတှေ ဥပမာ သားဆကျခွား ပညာပေး လုပျငနျးတှေ ၊ လိငျမှုဆိုငျရာ အသိပညာပေးခွငျးတှေ ၊ တရားမဝငျဆေးဝါးတှနေဲ့ တရားမဝငျသားဆကျခွား နညျးတှကွေောငျ့ နောကျဆကျတှဲ ဖွဈပျေါလာနိုငျတဲ့ အန်တရာယျတှကေို ကယျြကယျြပွနျပွနျ့ လူအမြားသိလာ အောငျ လုပျဆောငျဖို့လိုအပျနပေါတယျ။
လကျရှိ မွနျမာနိုငျငံမှာ သားဆကျခွားကိစ်စတှအေတှကျ မာရီစတုတျတို့ Myanmar Medical Association တို့လို အဖှဲ့အစညျးတှေ အမြားကွီးရှိပါတယျ။ ဖုနျးဆကျပွီး သိလိုတဲ့အခကျြတှေ မေးမွနျးတာ၊ သားဆကျခွားဆေး ၊ ပစ်စညျးမြားအခမဲ့ရယူတာတှေ လုပျလို့ရပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ အခမဲ့အှနျလိုငျးဝနျဆောငျမှုတှေ လုပျဆောငျပေးနတောမြိုးလညျးရှိပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ အမြိုးသမီးတှအေနနေဲ့ အသိပညာပေးအဖှဲ့အစညျးတှနေဲ့အမွဲထိတှပွေီ့း ကနျြးမာရေးဗဟုသုတတှေ ရှိလာအောငျ လုပျဆောငျသငျ့ပါတယျ။ တဈခုခု ဖွဈပှားခဲ့ရငျလညျး ကြှမျးကငျြသူ ပညာရှငျမြားရဲ့ အကွံဉာဏျတှကေို ရယူဆောငျရှကျသငျ့ပါတယျ။ ဒါမှ ပြျောရှငျကနျြးမာတဲ့ လူ့ဘောငျအဖှဲ့အစညျး ကို ဖနျတီးလာနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။
မိမိရဲ့ကနျြးမာရေးဗဟုသုတအသိဉာဏျနဲ့ တနျဖိုးရှိတဲ့ အသကျတှကေို အလဟဿမဆုံးရှုံးအောငျ ကာကှယျကွပါစို့။
Ref: မွနျမာနိုငျငံ ရာဇာသတျကွီးဥပဒေ